Vose blockchain mune imwe ..
Iyi basa rinokura uye rinowedzera kutsvaga ruzivo pamusoro pekutengeserana kwe blockchain yezhinji crypto-currencies uye zviratidzo. Mariri, takabatanidza akawanda blockchain platforms. Chengetai kero yekambani kana kutengeserana kanah kana zvimwe zvakare mutambo .. uye yakaitwa!
Somuenzaniso - 1F1xcRt8H8Wa623KqmkEontwAAVqDSAWCV.
Mu blockchain, unogona kuwana zvese zvekutengesa pahomwe! Ndekupi kupi kwaungawana muchengeti we blockchain mune imwe che crypto currency? vanozvishandisa zhinji cryptocurrency, kunyanya novices pashure ravo rokutanga kutengeserana, uye kunyanya kutengwa kwayo kana kupanana mari, mubvunzo unomuka - sei kutarira kutengeserana blockchain kana tarisa bitcoin kutengeserana kana kuona mamiriro ari kutengeserana, uye vamwe chete vanofanira kudzidza kutengeserana ID! Uye mune izvi hakuna chinhu chakaoma, nokuti chinozivikanwa kuti ruzivo urwu nderuzhinji. Izvo uye zvinofadza crypto-currencies, kuti zvachose blockchain yeumwe nomumwe wavo ari munharaunda yevanhu! Uye chero shandisi inogona kuona mairi nhoroondo yekutengesa kwose kubvira pakasikwa mari ye crypto. Uye basa redu richacherechedza kero uye kungoerekana batanidza kune zvakarurama blockchain kuitira kuti unogona nyore kuona sei nokukurumidza kutengeserana chisimbiso uye mashoko pamusoro hashi, voruzhinji kiyi kana nhamba nechigumbuso. Nezvo, unogona kutarisa kana kutarisa kutengesa kwekasiyana-siyana crypto uye zviratidzo. Chokwadi, unogona kuwana pachako mumidziyo jinda aiongorora blokcheyna nerimwe cryptocurrency kuburikidza specialized pfuma kana kukura munharaunda asi kupedza nguva! Sezvatinoziva tese nguva yedu inokosha uye dzisiri renewable zviwanikwa, uye zvino basa redu hakudi kutsvaka chinhu, chete kushandisa multihash.net
With basa redu unogona kuwana kwete chete kutsanya blockchain bitcoin asiwo chero mashoko pamusoro chero raivapo blockchain uye chero ruzivo pamusoro kwema yenyu. Service kuchakubatsira kuona conected asi dzinodzengerera mutengapwe. Kwete akasimbisa kutengeserana rinogona kuwanikwa nokukurumidza, uye chete ikozvino tsvaka nhamba chairatidza.
basa redu iri vakasununguka zvachose uye haashandisi chero kushambadza, kana uchida kutibatsira kugadzirisa muzvikwama dzedu dzinogona kuwanika papeji yokutanga! Udza shamwari dzako pamusoro pedu! Tiri kuramba kushanda kuwedzera kugona uye basa nokukurumidza. Ose nhau ratinoparidza panzvimbo chete nekuda kwedu Twitter.
Most nevakawanda blockchain nokuti nhasi ndiro: Bitcoin, Bitcoin Cash, BitConnect, Blocknet, Bytecoin, Dash, DigiByte, Dogecoin, Ethereum, Ethereum Classic, GameCredits, Golos, Golos Gold, Groestlcoin, Influxcoin, vara duku, Karbowanec, Karbo, LiteCoin, MONERO, Nav Coin, Zita, OUMAMBO HWECHIPIRI, NXT, OKCash, OmiseGO, Omni, PIVX, Qtum, Ripple, Stealthcoin, akatisiyira Lumens, Stratis, Syscoin, TransferCoin, VeriCoin, Vertcoin, Viacoin, Waves, Zcash, ZCoin nevamwe ..